आँट र ढाँट : लक्ष्मी पोखरेल | Himal Times
Home सिर्जना आँट र ढाँट : लक्ष्मी पोखरेल
लघुकथा : आँट र ढाँट
धीरज हिजै लाहुरबाट दुईमहिने बिदामा गाउँ फर्केको थियो । घरमा ढल्कदोँ उमेरकी आमा मात्र थिइन् । ऊ आमालाई पालो दिन पँधेरोमा पानी भर्न आँफै गयो । पँधेरोमा गोमा पनि थिई ।
“कहिले आइस् हो लाहुरे ? मेरो माया त के मार्थिस् र तैँले ´´ , ऊ रिसाएको हेरेर मज्जा लिन जिस्काउँदै भनी ।
“लाज पचेकी नक्कली , संसारमा तैँ एउटी मात्र बाँकी छेस् नि ! ´´ मुर्मुरिदै भन्यो , उसले ! “हिजो आएँ । दुई महिना बसेर जान्छु ।” धीरजले उस्तै जवाफ फर्कायो र आफ्नो प्लास्टिकको ग्यालेन भरेर घरतिर लाग्यो ।
पछिल्तिर गोमाको स्वर सुनियो ,” आईसकेपछि मलाई भित्र्याएरै जान्छस् होला नि ! तेरी आमालाई कतिञ्जेल पँधेरो पठाउँछस् ? ´´ धीरजको कन्पारो तात्यो । हातको पानी भुइँमा राखेर भन्यो,” के सोचेकी तैँले, आफ्नो कुल घरान हेर् र कुरो गर् । खुस्क्यो कि क्या हो ? गाउँकाले के भन्छन् ?”
“ के कुल घरानको के कुरो गर्छस् ? मान्छे सबै यौटै हो । दुई जातका, लोग्नेमान्छे, आईमाईमान्छे । फेरि गाउँकाले तेरा घरको पनि सद्दे कुरो गर्दैनन् त । तेरा बाउका कतिवटी स्वास्नी छन् , बाहिर ? वरबोटे परियार पवनको अनुहार तैँसँग काट्टीकुट्टी किन मिलेको छ । जातको कुरो न गर् मसित । भगवानले हात देका छन् गरेर खानेको हात हुन्छ जात हुन्न ।” पँधेर्नीहरू गललल हाँसे ।
धीरज मुखभरिको जवाफले रन्थन्निएर हिँड्यो । ग्यालेन सिकुवामा राखेर आमालाई बाउको बारेमा सोध्यो ।
“त्यस्ता पातर्नीका कुरा पनि पत्याउने हो ? तेरा बा त्यस्ता कहाँ छन् र ” ? धीरज सत्रह अठार वर्षको हुञ्जेलसम्म उसका बाबै घरै बस्थे । ऊ बाउदेखि दच्किन्थ्यो । कडा मिजासका थिए । खान खेल्नका शौकिन , धीरज लाहुर गएपछि बाबै पनि घरमा अडिएनन् । बाउसँग उति ठ्याक् नमिल्ने उसले पनि त्यति चासो राखेन ।
पर्सिपल्ट पानी थाप्न पँधेरो गएको धीरज गोमाको हात समाएर डोर्याउँदै घर पस्यो । आमाले बाटो छेक्न खोजिन् । धीरजले भन्यो, ” मलाई जन्म दिने आमा भएर तँपाईले मलाई नै ढाट्नु भयो । कुल घरानको खोस्टे कुरोमा बाको बारे पनि ढाकछोप गर्नु भयो । बरु यसले मेरो मुखैमा साँचो बोली । मैले हिजै सबैतिर डुलेर पत्तो लगाइसकेँ र बुझिसकेँ बाको जात ! ढाँटले जीवन काटिन्न । तपाई पनि बुढी हुनुभो। अब यसले मलाई आँटी । नढाँटी घर गरेर खान्छे “।
Previous articleमलेसियामा नेपाली सुरक्षागार्ड कुटपिट गर्ने राम गोपाललाई चार महिना जेल सजाय
Next articleश्रीमतीको खातामा रकम जम्मा गर्ने लेखापालको कर्तुत जनप्रतिनिधिकै पहलमा बाहिरीएको हो
ती केटी : बन्दना घिमिरे